Local News Archives - Page2of7- Myitter
city mart ရကြေ�...
လုပ် ရက် လိုက် တာ…..လူနာေ တွ ကုပေးနေ တဲ့ ဆရာ ဝန် ဆရာမတွေ ကို မှ ပစ်မှတ် ထားရသလားဗျာ
Myitter | June 13, 2020
လုပ် ရက် လိုက် တာ…..လူနာေ တွ ကုပေးနေ တဲ့ ဆရာ ဝန် ဆရာမတွေ ကို မှ ပစ်မှတ် ထားရသလားဗျာ ဆရာဝန် ဆရာမတွေ အေးအေး ဆေးဆေး လူနာ ကြည့်ပါရစေလားဗျာ။ ပုသိမ်ဆေးရုံကြီး ကျွန်တော်တို့ ဆရာဝန် ဆရာမ တွေ အေးအေးဆေးဆေး လူနာ ကြည့်ပါရစေလားဗျာ။
မင်းရာဇာ ရဲ့ အမှု ကို နိုဝင် ဘာ(၆) ရက်နေ့ မှာ စွဲချက် အမိန့်ချနိုင် ဖို့ တရား လိုဘက်က ပြင်ဆင်ထား
မင်းရာဇာ ရဲ့ အမှု ကို နိုဝင် ဘာ(၆) ရက်နေ့ မှာ စွဲချက် အမိန့်ချနိုင် ဖို့ တရား လိုဘက်က ပြင်ဆင်ထား သ ရုပ်ဆောင် မင်းရာဇာရဲ့ အမှုမှာတော့ မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်အတိုင်း စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးမှ ပြန်ကြားရေး ဦးအောင်နေမျိုးက အခုလို ပြောပြလာပါတယ်။ အိမ်အကူ
သရုပ်ဆောင် မင်းရာဇာ အိမ်ဖော်မလေးအပေါ်ရက်စက်ယုက်မာမှုကို အပြီးသတ် အမိန့်ချမည်ရက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီ
သရုပ်ဆောင် မင်းရာဇာ ရုံးပြောင်းလျှောက်ထားမှု ဇွန် ၂၂ ရက် အပြီးသတ် အမိန့်ချမည် သရုပ်ဆောင် မင်းရာဇာနဲ့ ဇနီးအပါအဝင် ၄ ဦး ရုံးပြောင်းလျှောက်ထားမှု လာမယ့် ဇွန် ၂၂ ရက်နေ့မှာ အပြီးသတ် အမိန့်ချမှတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်မင်းရာဇာ အိမ်က အိမ်အကူမိန်းကလေးကို အက်ဆစ်နဲ့ ပက်တာ၊ တူနဲ့ထုတာ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ
သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကို အကြောင်းမကြားဘဲ အိန္ဒိယကနေ မြန်မာနိုင်ငံ တမူးနယ်စပ်ကို ပြန်ဝင်လာသူ ၆ ဦးကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီး တရားစွဲအရေးယူဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ တမူးမြို့ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမျိုးမင်းအောင်က DVB ကို ပြောပါတယ်။ အိန္ဒိယကနေ ခိုးဝင်လာသူတွေဟာ ချင်းပြည်နယ်က ဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ ဆေးရုံမှာထားရှိပြီး ကျန်းမာရေး ဓာတ်ခွဲအဖြေ ရရှိလာတဲ့ မူတည်ပြီး အရေးယူသွားမယ်လို့
ဆင်းရဲလွန်းတဲ့ ဒီအဘွားအတွက် ကူညီပေးကြပါအုံး……
အသက် ၉၀ ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အဖွားအိုက မိဘတွေ မရှိတော့တဲ့ မြေးမလေးကို ကန်စွန်းရွက်ရောင်း ထင်းရောင်းပြီး ရှာဖွေကျွေးမွေးပြီး ပညာသင်ပေးနေတာပါ။ နေစရာကတော့ မရှိလို့ လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်ထဲမှာ တဲထိုးပြီးနေရတာပါ။ တဲလေးကလဲ ၅ပေသာသာလေးပဲရှိတဲ့ တဲလေးပါ။ လှိုင်သာယာမှာနေတဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ဝင် ညီမ နေခြည်က သွားရောက်ကြည့်ရှု ဓာတ်ပုံရိုက် သတင်းပေးလာပါတယ်။ တဲလေးကလဲ ၅ပေသာသာလေးပဲရှိတဲ့
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း ဩဂုတ်လနှောင်းပိုင်းမှ ထုတ်ပြန်နိုင်မည်
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း (ဆယ်တန်း) အောင်စာရင်းတွေကို လာမယ့် ဩဂုတ်လနှောင်းပိုင်းလောက်မှသာ ထုတ်ပြန်နိုင်မယ်လို့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောပါတယ်။ နှစ်စဉ် ဇွန်လနဲ့ ဇူလိုင်လတွေမှာ ဆယ်တန်းအောင်စာရင်းတွေကို ထုတ်ပြန်ကြေညာလေ့ရှိပေမယ့် ဒီနှစ်မှာတော့ ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် အဖြေလွှာစစ်ဆေးမှုတွေကို နောက်ကျ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် အောင်စာရင်းကိုလည်း နောက်ကျမှ ထုတ်ပြန်နိုင်မယ်လို့ ဇွန်လ ၁၂ ရက်က နေပြည်တော်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ ပြုလုပ်တဲ့
လူ နာ အမှတ် (၂၄၉) ကို ရင်ခွဲရုံနား မှာ တယောက် ထဲ ထားတယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စ တာဝန်ခံ ဆရာဝန် ဒဲ့ရှင်းပြီ
Myitter | June 12, 2020
လူ နာ အမှတ် (၂၄၉) ကို ရင်ခွဲရုံနား မှာ တယောက် ထဲ ထားတယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စ တာဝန်ခံ ဆရာဝန် ဒဲ့ရှင်းပြီ ကို ဗစ်လူနာအမှတ် (၂၄၉) ကို ဗန်းမော်ဆေးရုံက ရင်ခွဲရုံနားမှာ တယောက်ထဲ သီးခြားခွဲထားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအပေါ် တာဝန်ခံ ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင် ဒဲ့ရှင်းတဲ့ အကြောင်းအရာကို
ကိုဗစ် ကို အောင်နိုင်သွား တဲ့ နိုင်ငံတွေ နဲ့ အဆိုးအကောင်း ကို သင်ခ န်းစာ ယူရမယ့် မြန်မာပြည်
ကိုဗစ် ကို အောင်နိုင်သွား တဲ့ နိုင်ငံတွေ နဲ့ အဆိုးအကောင်း ကို သင်ခ န်းစာ ယူရမယ့် မြန်မာပြည် ရွှေပြည်ကြီး မှာ နောက်ထပ် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး အသစ်တွေ့သူတွေ တရက်တည်း ဆယ်ဂဏန်းအထက် ထပ်တက်လာလို့ စိတ်ညစ်နေလား။ ကိုဗစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စိတ်ချမ်းသာစရာ အချက်တချို့ကို ပြောပြမယ်။ ပေါ့စ်တစ်လူနာ လက်ကျန်
မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ကစားသမားဟောင်း ကိုအေးဆန်း ရေနစ်သေဆုံး
စိတ်မကောင်းစရာသတင်း မြန်မာဘောလုံးအကယ်ဒမီမှာ နည်းပြတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ကစားသမားဟောင်း ကိုအေးဆန်းဟာ ထားဝယ်သရက်ချောင်းရေတံခွန်မှာ ရေနစ်ဆုံးပါးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ၂၀၀၇ ဆီးဂိမ်းငွေဆုရ အသင်း အသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သရက်ချောင်းရေတံခွန်တွင် လူတစ်ဦးရေနစ်သေဆုံး 12.6.2020ရက်နေ့ 5:00pm အချိန် လောက်တွင်သရက်ချောင်းရေတံခွန်တွင် လူတစ်ဦးရေနစ်သေဆုံးရန်ကုန်က ဘုရားဖူးလာတယ်ဧည်သည်လို့သိရပါတယ်။ ယောက်ျားလေး အသက်(၃၅)နှစ်ခန့်။ Ven Kaitti Sãra unicode version စိတျမကောငျးစရာသတငျး
တဈတိုငျးပွညျလုံးက ပွညျသူတှအေတှကျ အမစေုက အထူးသတငျးကောငျးပါးလိုကျပါပွီ..
ကဲ အမေစု ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ပြိုင်မယ် တဲ့ Confirm ဖြစ်သွားပါပြီ ……. အားလုံး အမေ နဲ့ အတူ အမေ့ပါတီ ဘက်က ရှိတယ် ဆိုတာ အမေ့ပုံလေးတွေ မန့်ပြီး ရပ်တည်ကြမယ်နော် ……… #မင်းရသ Photo : အစ်ကို Thet Aung အမေစုပြောတာက
မန်းလေးက ၁၀ တန်းကျောင်းသူမှာ Covid Positive ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုသွားပြီ
ဥရောပ တိုကျ ရှိ လူ ၄ ပုံ ၁ ပုံ ကြျော ( ၇၅ သနျးမှ သနျး ၂၀၀ ) အထိ သဆေုံးခဲ့ တဲ့ ကမ်ဘာ့သမိုငျးတှငျ အဆိုးဆုံး နှငျ့ အထငျရှားဆုံး ကပျရောဂါ
city mart ရကြေျော Toilet ထဲအခုလေးတငျဖွဈသှားတာ….
နှာခေါင်းစည်းမတပ်ပဲ အပြင် ထွက်လျှင် အရေးယူတော့မည့် ရန်ကုန်
အသှားမတျော တဈလှမျး အစားမတျော တဈလုပျ
© 2020 Myitter.